Oke osimiri Indian: njirimara, mbido, ihu igwe, ahịhịa na ahịhịa | Netwọk Mgbasa Ozi
Oke Osimiri Indian
N'ime ha niile oké osimiri ụwa bụ Oke Osimiri Indian. Ọ bụ otu n'ime akụkụ nke oke osimiri zuru ụwa ọnụ nke ụwa anyị na-agbasa ókèala nke Middle East, South Asia, Australia na East Africa. Ọ nwere nha nwere ike ijide 20% nke mmiri niile dị na mbara ala. Ọ nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mpaghara agwaetiti ndị ama ama na ndị njem nleta. Otu n’ime agwaetiti ndị a kacha mara amara bụ Madagascar.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Osimiri Indian, mbido ya, nka ala, ihu igwe, ahịhịa na ahịhịa.
1 Mmalite nke Osimiri Indian
3 Oke osimiri India
Mmalite nke Osimiri Indian
Ihe mbụ ị ga-echebara echiche bụ otú e si kee osimiri niile nke ụwa. Emeela ka o doo anya na imirikiti mmiri dị na mbara ụwa malitere site n'ime ala ụwa site na ọrụ mgbawa na ike na-agagharị. Ebe ọ bụ na na mbido ntọala ụwa, enwere naanị alụlụ mmiri, ọ kachasị n'ihi ụwa okpomoku dị elu nke na o kweghị ka mmiri bụrụ mmiri. Ka oge na-aga, ikuku nke ụwa emere taa iji mepụta oke osimiri anyị maara taa. Na mgbakwunye, mmiri ozuzo bilitere ma nke a wetara mmiri mmiri buru ibu nke malitere ịwụnye ala ala na bekee.
Osimiri ndị chebere ugwu ugwu malitekwara itolite. Site na ngagharị nke tectonics plate, kọntinent bidoro ikewapụ ma na-agagharị, na -emepụta oke ala na oke osimiri dị iche iche. N’ụzọ dị otu a, e hibere Oke Osimiri India kemgbe ha dị kpọkọtara ọnụ ọnụ kọntinent niile na ala ndị dị n'Africa, Oceania na Eshia.
Oke osimiri a dị n’etiti ndịda India na Oceania, ọwụwa anyanwụ Afrịka na mgbago ugwu Antarctica. Ọ na-esonyere otu n'ime iyi nke osimiri atlantic na ndịda ọdịda anyanwụ, ma n’ebe ndịda ọ na-asa ahụ ụsọ osimiri nke ndịda Africa. Soro ya oke osimiri Pasifik maka akuku Iru-anyanwu.
Ọ nwere omimi na nkezi nke mita 3741, ebe oke omimi ya ruru mita 7258, ebe a dị na agwaetiti Java. Anyị nwekwara ike ikwu maka ogologo oke osimiri ya. Ọ nwere oke ala gbara osimiri okirikiri nke kilomita 66 na olu ya dị ihe dịka cubic 526.
Ọ bụ oke osimiri nke atọ kachasị na mbara ụwa niile ebe ọ nwere mpaghara ihe dịka 70.56 nde kilomita kilomita.
Banyere ọdịdị ala ya, ọ guzobere na 86% nke ókèala ahụ niile bụ ihe mkpuchi pelagic. Ihe ndozi ndị a abụghị nanị ezigbo oge ọkọchị nke na-agbakọta n'ihi nsonye nke mkpụrụ akụkụ mmiri. Ihe ndị a niile na-etolite na mmiri miri emi karị ma bụrụ nke mkpokọ silica biogenic. A na-ezokarị shells ndị a ma phytoplankton na zooplankton. Ha na-ejikarị calcium carbonate emeju. A na-ahụ ụfọdụ ihe eji arụ ọrụ siliciclastic dị obere n’ime omimi.
E kpuchiri 14% nke ala na obere oyi akwa nke sedimenti na-atụ egwu. Seddị mmiri ndị a niile na-eme usoro nke ihe na-emepụta na ala nke ala ma sonyere nsị mmiri.
Oke osimiri India
Anyị ga-ekwu maka otu ihu igwe dị ugbu a na mpaghara Indian Ocean niile. Anyị maara na n'akụkụ ndịda nke oké osimiri na-abịa ihu igwe na-akwụsi ike. Agbanyeghị, n'akụkụ ugwu enwere nnukwu nsogbu nke ikuku ikuku. Nsogbu a na - ebute ime nke monsoons. A maara Monsoons gburugburu ụwa dịka ikuku oge a na-emepụta site na nhapụ nke eriri ikuku. Oke ikuku a nwere ike isoro oke mmiri ozuzo soro ya, agbanyeghị na ha nwere ike ịjụ oyi ma kpọọ nkụ. Igwe mmiri a niile na-emetụta obodo ndị dị n'ebe ndị a ma dabere na ọrụ ugbo.
Oke mmiri ozuzo na-enwekarị mmetụta na-adịghị mma na akụnụba. Otu ihe atụ bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mmiri mmiri na-egbu kwa afọ na India site na mmiri ozuzo ndị a. Na ndịda akụkụ nke oké osimiri, ifufe ndị na-erughị ufiop, ọ bụ ezie n'oge okpomọkụ, a na-enwekarị ụfọdụ pụtara ike ma na-emebi ebili mmiri.
Anyị ga-enyocha ihe iche iche sitere na oke osimiri a. Anyi maara na n'ime mmiri nke Osimiri Indian abụghị naanị osisi mmiri ka agụnyere. A osisi ndị tumadi ekewet nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, aja aja na-acha ọbara ọbara algae. Ọ na-agụnyekarị ụdị ahịhịa niile dị n'ụsọ osimiri na agwaetiti.
Otu n’ime ụdị oke osimiri a kacha mara amara bụ eAdiantum Hispidulum. Ọ bụ ụdị obere fern nke ezinụlọ Pteridaceae. Ezinụlọ a nwere ọtụtụ ebe nkesa na mpaghara niile nke Polynesia, Australia, Africa, New Zealand na ọtụtụ agwaetiti na Oke Osimiri Indian. Ọ bụ ụdị fern nke nwere ike itolite n'etiti nkume ma ọ bụ n'ebe ụfọdụ nwere ala ndị echedoro karịa. Ejiri mara ya na-enwe tufts nwere ike iru 45 centimeters n'ogologo.
O nwere ụdị akwụkwọ triangular na elliptical ya ma ha mepee na ndụmọdụ nke na-ejedebe n'ụdị onye ofufe ma ọ bụ diamond. Ifufe sitere n'oké osimiri a na-ebute ihu igwe nke na-enye ohere uto nke ụdị fern a na agwaetiti ndị a.
Osisi ozo di iche iche puru iche puru iche n’osimiri Indian bu Andasonia. Ndị a bụ osisi pụrụ iche nke nwere nnukwu ogwe, nke na-adịghị agbanwe agbanwe ma ọ bụ nke nwere karama nke jupụtara n'ụkọ. Ogo oscillates ọzọ ma ọ bụ obere n’agbata mita iri atọ na atọ, ebe dayameta nke okpueze ya gafere mita iri na otu.
Banyere fauna, ọ nwere oke njedebe n'ihi eziokwu ahụ bụ mpaghara oke osimiri o nweghi phytoplankton zuru oke, nke bụ ihe ndabere nke web food. Agbanyeghị, a na-ahụ ọtụtụ ụdị dị ka oporo na tuna n'akụkụ ugwu, ụfọdụ na-enwe anụ ọhịa whale na mbe. E nwekwara ebe ụfọdụ nwere okwute coral.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Indian Ocean na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Oke Osimiri Indian
Pyrenees Ihu Igwe